कोरोनो भाइरसलाई लिएर सी चिङपिंग कति कमजोर छन्? « Deshko News
कोरोनो भाइरसलाई लिएर सी चिङपिंग कति कमजोर छन्?
ब्राण्ड “पीपुल्स रिपब्लिक चाइना” तनावका साथै समस्यामा अल्झेकाे छ। मानौं तियानानमेन स्क्वायरमा माओ जेदुंगको विशाल चित्र भूकम्पको कम्पनले थरथर काँपिरहेकाे थियाे। तर यदि भित्रबाट धकेल्याे भने याे वस्तावमा तल झर्नुका साथै पतन नै हुन्छ। कोरोनाभाइरस महामारीबाट जाेगाउन निसन्देह कम्युनिष्ट पार्टी र यसअघिका सबै महासचिव सीलाइ जिनपिङ विश्वासकाे जित्नु छ।